Ihe edemede Jack Poyntz na Martech Zone |
Edemede site na Jack Poyntz
Ụlọ ihe nkiri Jack Poyntz bụ ụlọ ọrụ weebụ na ụlọ ọrụ ndị ọkachamara kwadoro. Ha na-elekwasị anya n'inye ihe ngwọta nke ebe nrụọrụ weebụ iji nyere ụlọ ọrụ ndị nwere oké ọchịchọ eto eto n'ịntanetị. Ha na-anakwere ihe ịma aka ọhụrụ site na ọchịchọ iji nyere ndị ahịa ha aka ime nke ọma.
Fraịde, Machị 8, 2019 Wednesday, October 14, 2020 Jack Poyntz
Ndị ọchụnta ego kwesịrị ịkwalite azịza weebụ ha na-agagharị iji nweta egwuregwu ahụ. Ọ bụ ụzọ mbụ ebe ọtụtụ mmadụ na-aga ịchọ ụlọ ahịa kọfị kacha nso, onye ọrụ ụlọ kachasị mma, yana ihe ọ bụla Google nwere ike iru.